Abakhiqizi Bemithi Abakhiqizi & Abahlinzeki - Ifektri yaseChina Yezokwelapha
Izithako Zokunakekelwa Komuntu Siqu
Ama-Acrylates / C10-30 i-Alkyl Acrylate Crosspolymer
Izixazululo / Abaxhumanisi
Ama-Acrylates / i-C10-30 Alkyl Acry ...
I-Povidone i-homopolymer ye-1-vinyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrrolidone), incibilika ngokukhululeka emanzini, ku-ethanol (96%), ku-methanol, nakwamanye ama-solvents we-organic, ancibilika kancane ku-acetone. i-powder emhlophe noma ama-flakes, asukela kokuphansi kuya ekuphakameni okuphezulu kwesisindo kanye nesisindo esiphansi kuya kwesiphezulu, esibonakala nge-K Value, nge-hygroscopisty enhle kakhulu, ukwakha ifilimu, ukunamathela, ukuzinza kwamakhemikhali nezinhlamvu zokuphepha ezinobuthi. Amapharamitha Okhiye Wobuchwepheshe ...
ICopovidone enesabelo se-60/40 se-N-Vinylpyrrolidone ku-Vinyl Acetate, encibilikayo kuma-solvents amaningi. Ukuncibilika okuhle emanzini, otshwaleni nakwamanye ama-solvent. Amapharamitha Wobuchwepheshe Osemqoka: Ukubukeka kwempuphu emhlophe noma ephuzi emhlophe noma ama-flakes, i-viscoscopic viscosity (Express as K Value) 25.20 ~ 30.24 Solubility Ikhululekile ukuncibilika emanzini, otshwaleni i ...
ICrospovidone iyi-PVP enqamulelayo, i-PVP engenakunyibilika, iyinhlanganisela, ayincibiliki emanzini nawo wonke amanye ama-solvent ajwayelekile, kepha ivuvukala ngokushesha ku-solutbition enamanzi ngaphandle kwe-gel. okuhlukaniswa njengoCrospovidone Type A no Type B ngokuya ngosayizi wezinhlayiyana ohlukile. Amapharamitha Wobuchwepheshe Osemqoka: Uhlobo Lomkhiqizo weCrospovidone Uhlobo A Ukubukeka kohlobo lweCrospovidone B noma impuphu emhlophe noma ephuzi ngokumhlophe noma ama-flakes. Ukumiswa kwe-CA kwenzelwa ...
I-Lactose Monohydrate imhlophe, ayinambitheki, i-crystalline powder.Ine-compressibility enhle nokungaziphathi kahle ngenxa yenhlayiya yayo enhle nendawo ephezulu ephezulu.Lo mkhiqizo uhambisana nezicelo ze-USP / EP / BP / JP ne-CP standard, esetshenziswa kakhulu ku-standard i-granulation emanzi, ingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene ngenxa yokusatshalaliswa kwayo kosayizi wezinhlayiyana (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh, 200Mesh, 300Mesh).
Imhlophe, ayinambitheki, i-crystalline powder enefluidity enhle.Izinhlayiya eziqhakazile zeLactose ezikhiqizwe ngenqubo ye-crystallization zingahlukaniswa ngezincazelo eziningi ngosayizi omncane wokusabalalisa ngemuva kokuhlunga (40Mesh, 60Mesh, 80Mesh, 100Mesh, 120Mesh). I-Sieved Lactose iqukethe i-crystal eyodwa kanye nokubamba okuncane kwamakristalu. Imikhiqizo yokucaciswa okuhlukile ingasetshenziselwa ama-ocassions ahlukahlukene. I-granulation Emanzi akuyona inqubo efunekayo yokugcwaliswa kwamaphilisi ngenxa yokungaziphathi kahle, umkhuhlane ...
I-Lactose Yokomisa I-Spray
I-Spray-Drying Lactose imhlophe, i-powder enganambitheki ene-fluidity enhle kakhulu.Ine-fluidity enhle kakhulu, ukuxuba ukufana nokucindezela okuhle ngenxa yenhlayiyana eyindilinga nokusatshalaliswa kosayizi omncane, ilungele ukucindezelwa okuqondile ikakhulukazi, ukukhetha okuhle kokugcwaliswa kwe-capsule nokugcwaliswa kwegranule. Izinzuzo Zokusebenza: Ukwahlukana okusheshayo ngenxa yokuswakama kwamanzi okuhle; Ubulukhuni be-tablet enhle ngenxa yokomiswa kwesifutho; Ingasatshalaliswa ngokufanayo kumafomula aphansi e-do for the ingredient drug; Th ...
I-Lactose-Starch Compound Spray-drying compound equkethe i-85% ye-Lactose Monohydrate ne-15% isitashi sommbila.Kwenziwa ngokucindezela okuqondile, futhi kuhlanganisa uketshezi oluhle kakhulu, ukucindezela kanye nokwahlukana. I-Lactose-Cellulose Compound Luhlobo lwenhlanganisela yokomisa isifutho equkethe u-75% we-Alpha Lactose Monohydrate no-25% we-cellulose powder.Umkhiqizi une-fluidity enhle kakhulu, futhi yenzelwe ukucindezelwa okuqondile.Ubuchwepheshe bokubekwa etafuleni buba lula futhi kube ne-economica ngenxa .. .